eSancharpati | रंगशालामा खेलाडीहरू ‘केपी बा’ भन्दै किन उफ्रिए ? - eSancharpati रंगशालामा खेलाडीहरू ‘केपी बा’ भन्दै किन उफ्रिए ? - eSancharpati
रंगशालामा खेलाडीहरू ‘केपी बा’ भन्दै किन उफ्रिए ?
अस्ति सोमबार दशरथ रंगशालामा ३७ वर्षपछि बङ्गलादेशविरुद्ध फुटबल प्रतियोगिता नेपालले जितेपछि एकाएक ‘केपी बा,वी लभ यु’ को नारा घन्कियो ।
प्रतियोगिता जितेपछि सामान्यतयाः मुलुकको नाम र समर्थनमा नारा लाग्नु अस्वाभाविक होइन । तर,दशरथ रंगशालामा नेपालको समर्थनमा होइन,प्रधानमन्त्रीको समर्थनमा राजनीतिक कार्यकर्तालेझैं नारा लगाएपछि उपस्थित दर्शकहरू छक्क परे ।
फाइनल खेल हेर्न पुग्नुभएका प्रधानमन्त्री ओलीले विजेता टोलीलाई ट्रफी वितरण गरेपछि नेपाली टिमसँग फोटो सेसन गर्ने क्रममा खेलाडीहरूले ‘केपी बा वी लभ युु’ को नारा लगाएका थिए ।’ स्रोत भन्छ ‘पशुपतिको शिव लिंगलाई सुनको जलहरीले बेर्न हाताहाती तीस करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराउनुभएका प्रधानमन्त्री ओलीले यसअघि पनि बिजेता कृकेट खेलाडीलाई पुरस्कृत गरिसक्नुभएको अनि आफ्नो समर्थन र गुणगान रुचाउने स्वभाव भएकाले खेलाडीहरूलाई रणनीतिक हिसाबले नारा लगाउन भनिएको हुनसक्छ ।’
कतिपयले खेलाडीलाई नारा लगाएपछि प्रतिव्यक्ति १ लाख रुपैयाँ पाइने म्यासेज प्रतियोगिता अगावै गरेको ठोकुवा गरेका छन् ।
विगतमा पञ्चायतकालमा पनि सत्तामा रहेका धीरेन्द्र शाह र शरद्चन्द्र शाहहरुले खेलाडीहरूलाई त्यसरी नै आफ्नो पक्षमा प्रयोग गरेका थिए । अहिले सबै क्षेत्रमा आफ्नो प्रभुत्व कायम राख्न सफल प्रधानमन्त्री ओलीले खेलकुद क्षेत्रलाई उपयोग गर्न यो अवसर लिनु अन्यथा होइन । यसबारे राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका एकजना पूर्वसदस्य सचिव ‘नो कमेण्ट” भनेर तर्किएका छन् ।
खेलकुद डटकमका सम्पादक प्रकाश तिमिल्सिनाले ‘वर्तमान राजनीतिक परिवेशलाई मध्यनजर गर्दै खेलाडीले उक्त नारा लगाएको हुनसक्ने’ बताएका छन् । कतिपयले खेलाडीलाई नारा लगाएपछि प्रतिव्यक्ति १ लाख रुपैयाँ पाइने म्यासेज प्रतियोगिता अगावै गरेको ठोकुवा गरेका छन् ।
खेलाडीहरूको सोमबारको नारामा नेपाली एन्फाका मधुसुदन उपाध्याय पनि जोडिएका छन् । काठमाडौं हात्तिगौंडा निवासी उपाध्याय ५ नम्बर निर्वाचन क्षेत्रसमेतको नाताले एमाले महासचिव ईश्वर पोखरेलका निकटस्थको रुपमा चिनिन्छन् ।
त्यहि फेरोमा रंगशालामा नाराबाजी घन्केको भन्नेहरू थुप्रै भेटिएको खेलकुद परिषद परिसरमा चर्चा छ । जन आस्था